सहिदको सपना पूरा भयो कि भएन तीन करोडले हेरिरहेका छन् « Loktantrapost
सहिदको सपना पूरा भयो कि भएन तीन करोडले हेरिरहेका छन्
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ११:०७
छायाँको लस्करका लेखक डा केआर खम्बूसँग सुखानी सहिद र तत्कालीन झापा आन्दोलन बारे गरिएको कुराकानी
सुखानीका सहिदले पुर्याएको योगदानलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
सुखानी सहिदहरूले सहादत प्राप्त गरेको दिन फागुन २१ जति नजिक आउँछ उति हामी सबैलाई खबरदारी गरिरहेको जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले त देश र जनताको रक्षाको लागि निरङ्कुशताविरूद्ध गोली खाएर जीवन आहुती दिनुभयो । उहाँहरूमध्ये कोही लक्का जवान हुनुहुन्थ्यो भने कोही भरभराउँदा युवा । तर उहाँहरूको रगतको थोपा थोपा क्रान्तिका रक्तवीज भएर देशभरी उम्रिएर अन्ततः देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकियो । उहाँहरू त नेपाली क्रान्ति र परिवर्तनको प्रेरकपुञ्ज नै बन्नु भएको म ठान्छु ।
सहिदले देखेको सपना अनुरुप सरकारले काम गर्न सक्यो कि सकेन ?
वास्तवमा अहिलेको सरकार उनै सुखानी सहिदहरूका सहयोद्धा अर्थात जिउँदा सहिदका हातमा परेको छ । ती सहिदहरूले देखेका सपना देशलाई निरङ्कुश शासकबाट मुक्त गर्ने अनि सुखी जनता र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने नै थियो । अहिलेको नेकपाको सरकारको मुख्य लक्ष्य पनि यही सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने नै हो । सोही अनुसार कार्य भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरो त तीन करोड नेपालीका आँखाले हेरिरहेको नै छ । दुई वर्ष बित्यो अरू तीन वर्ष बाँकी छ । जनताका गुनासो त सञ्चारमाध्यममार्फत सुनिदैछ । तर अझै तीन वर्ष यस सरकारको कार्य अवधि भएकोले अहिले नै सही अनुमान लगाउन सकिन्न । मलाई विश्वास छ सहिदको रगतले लेखिएको इतिहासलाई पार्टी पङ्ति र सरकारले भूल्ने छैनन् । जनताको अनुहारमा आँशु होइन हाँसो ल्याउने छन् । जनताको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न यो व्यवस्था सक्षम बन्ने छ ।
गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भन्छन्, जनताले अनुभूत गर्न नसक्नुको कारण ?
हो, गाउँ गाउँमा सिंहदरवार आयो भन्छन् र आएको पनि महसुस गरिदैछ । हरेक नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको वार्ड वार्डमा प्रशासनिक इकाइहरू स्थापित भइसकेका छन् । जनताको आधारभूत कामहरू त्यहीँबाट सञ्चालन भएको देखिरहेका छौं । सोझा तथा निमुखा जनता जिल्ला वा केन्द्र धाउनु पर्ने चलन हट्दै गएको अनुभूति गरिदैछ । बाटोघाटो, पुल आदि हरेक गाउँ गाउँमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । तर यस्तो परिपाटी हिजोको व्यवस्थामा थिएन । तर आजको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको यी प्रतिफल हुन् झैँ मलाई लागेको छ । तर नयाँ व्यवस्था भए पनि मानिसहरूको चिन्तन भने हिजैको सामन्तीको जस्तो भएकोले आफ्नै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण पनि हुन थालेको सुनिन्छ । यसको उपजकै रूपमा कहीँ कतै त्रुटि कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन्, तथ्यबाट सत्य खोज्नु पर्छ, नजरअन्दाज चै गर्न हँुदैन ।
सुखानीका सहिदको बारेमा पुस्तकमा के लेख्नु भएको छ ?
सुखानीका ती पाँच सहिदहरू (रामनाथ, बीरेन, कृष्ण, नेत्र र नारायण)लाई म सँधै बाँचेर मर्नु भन्दा मरेर अमरत्व प्राप्त गर्ने महान क्रान्तिकारी आत्माहरू भनेर सम्झन्छु, अनि श्रद्धासुमन अर्पण गर्छु । मेरो पुस्तक छायाँको लस्करमा ती सहिदहरूलाई तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती सरकारले निर्ममतापूर्वक हत्या गर्दाको परिवेशलाई उतार्ने कोसिस गरेको छु । उहाँहरूमध्ये दुई सहिदहरू (रामनाथ दाहाल र बीरेन राजवंशी)सँग केही महिनाअघि मात्र भेटघाट गरिएको प्रसङ्ग पनि उतार्ने जमर्को गरेको छु । यसैगरी उहाँहरूसँगैका क्रान्तिकारी सहकर्मी आरके मैनाली, केपी ओली, सीपी मैनाली, केपी पकुवाल, एमसी अधिकारी आदिसँगका अबिर्सनीय संस्मरणहरू पनि उल्लेख गरेको छु । समग्रमा यो पुस्तकमा झापा सङ्घर्षको प्रारम्भिककालको सक्दो विश्लेषण गरेको छु । तर मैले सुनेको वा कसैले भनेको आधारमा होइन आफैले भोगेका अनुभवहरूलाई मात्र राखेको छु । सुखानी सहिदहरू अमर रहुन् ।